Mahombekombe eiyo hwiricheya-Kusungwa
Kana zvasvika kumahombekombe munhu wese anoda kuenda uye kunakidzwa. Kune akawanda mahombekombe iwe aunogonawo nekuti isu takaita kunge takakomberedzwa nemvura saka zvinoreva kuti kune boka remabhishi akatenderedza. Wiricheya-yakasungwa vashandisi vanogona kufunga kuti hakuna akawanda wiricheya inoshamwaridzika mahombekombe. Tiri pano kuratidza zvimwe nhasi nevamwe wiricheya huru mahombekombe ane hushamwari iwe unogona kuenda kuzororo kunze kwekunge iwe uchigara padhuze nayo.
Kumadokero kwegungwa kune musha kune akawanda matsime anoziva nzvimbo senge LA neHollywood. Kune zvakawanda kwazviri pane kwete chete idzi dzakakurumbira nzvimbo. Mahombekombe ari kumadokero kwemahombekombe anofanirwa kupa uyezve, ivo vane wiricheya inoshamwaridzika mahombekombe zvakare. Santa Monica ndeimwe yemahombekombe anonakidza uye anozivikanwa kumahombekombe ekumadokero. Vanopa zvakasiyana ramp kukubatsira iwe uye pier zviri nyore kufambidzana uye ine maresitorendi akasiyana aungaedza. Kune zvekare vatengesi vengarava uye vanoita zvinoyevedza kana iwe usati wamboona mutambi mumugwagwa.
Mahombekombe egungwa isarudzo yedu kubva kuAustralia uye sezita zvarinoreva hazvisi zvevarume chete ivai nechokwadi. Izvo, zvirokwazvo, chaizvo kufambidzana gungwa uye pane zvakawanda zvekuita pano. Vane mafi, nzvimbo dzekudya, uyezve nezvimwe zvitoro. Ivo zvakare vanopa kumahombekombe mawiricheya kana unoitika kuti ukanganwe yako wiricheya kumba. Ehe, Australia iri kure kure nevazhinji vedu asi hazvireve kuti hatigone kuenda. Sezvo nyika yakatenderedzwa zvakakwana nemvura saka huwandu hwemabhichi hauperi.
Florida iri kumusha kune yakakura Disneyland uye timu yeMiami Heat basketball. Key Largo muFlorida iri kufambidzana kuburikidza ramp uye zvakare matanda ekufamba kuti ave nechokwadi chekupfuura. Chikumbiro chikuru cheiyi gungwa ndiko kugona kuenda kusnorkeling uye diving. Vanoshandisa mawiricheya vanokwanisawo kuenda kunoedza izvi nerubatsiro rwemamwe makambani emuno anopfekedza vanoshandisa mawiricheya kune zvinoitika pasi pemvura. Izvi zvinonzwika zvinonakidza zvikuru kune remara nekuti remara vanhu havazofaniri kurasikirwa.
Cancun iyo iri muMexico ine nzvimbo dzinokatyamadza zvikuru iwe yaungangopupura uye uone nemaziso ako. Inozivikanwa kuva nzvimbo yemuchato pamwe nenzvimbo inopisa yezororo. Wiricheya kuwanika kunogona kupa mukurumbira nekuti nzira dzavo dzakapamhamha uye zvakare vane dzakawanda nzira dzemabhodhi. Kana iwe ukatora zororo kunzvimbo ino saka unofanirwa kutora rwendo kuenda kumahombekombe avo epachivande iwe aunogona kuwana.
Isu takachengetedza zvakanyanya kufambidzana kwekupedzisira iyo iri muLoutraki, Greece. Nzvimbo iyi inonzi iyo sirens resort uye ine yakanakisa wiricheya ruzivo nekuda kwenzvimbo dzekugara dzakanaka dzavanadzo. Ivo vanotove nemakamuri akakumikidzwa chete vanoshandisa wiricheya iyo inoratidzira yekugezesa shawa. Nzira dzekufamba dzakapamhamha uye imwe yeiyo akanakisa maficha ingadai iri bhiriji rinotyisa rinopinda mugungwa!